Date My Pet » How To Kiss Via Zodiac Sign
kubudikidza Nikodhimo Gaudette
Last updated: Chivabvu. 25 2020 | 3 Maminitsi verenga
Wokutanga kisi muine munhu mumwe mukuru nguva ari budding ukama, uye chinhu vaviri uchava ndichiyeuka. Kana uine zvakaipa rokutanga nokusveta, hakuna kazhinji haasi chero kupora kubva. Verenga kuti aone sei uchifanira ndimbondotsvoda zuva rako kekutanga:
Paunotanga kutsvoda ane yechinguva, Kazhinji regai kunetseka pamusoro kuenda zvakare kutsanya kana kumirira nguva yakakodzera. Kana uchida amutsvode navo, kuzviita pasina kumbozengurira. Vanonzwisisa here mukutora nguva uye kuva zvakananga. Ngachive inopisa uye wakazadzwa. Kunyange unofanira kuziva, vanenge kukutsvoda pakutanga.
Paunotanga kutsvoda munhu Taurus, uchida kumirira. Usakurumidza kuzviita, uye regai kuita kutsvoda inopisa uye nokutsanya. chiratidzo ichi anoda zvishoma pakutsva, saka kuti okupedzisira. Havazosimudzirani kutora itsvo, saka iwe unenge vanofanira. Kurohwa kana ndimbondotsvoda mitsipa yavo pamberi penyu kutsvoda miromo yavo pakunyatsomuziva kwavari kuenda.
Paunotanga kutsvoda munhu Gemini, uvaudze uchida amutsvode navo kutanga. chiratidzo ichi panoitika mashoko nani kupfuura chero. Uchingotizevezera seductively mune nzeve dzavo, ipapo nibble pamusoro payo. Kundofudza maoko avo kana ruoko rwavo (zvose kutongwa Gemini). Vamwe Geminis vachava wokubata kutanga, asi kazhinji vari zvose nerudo uye hapana wokubata, saka uchafanira.
Paunotanga kutsvoda munhu Cancer, unofanira kuziva zvavari chinyakare uye kufanana vakasununguka zvinokukanganisa, saka itai pakuguma musi pasuo. Paunenge amutsvode navo, kuasimudza mumaoko enyu saka vanofunga ndakachengeteka. Ngazvirege mberi yakarebesa, uye regai kuva sviba.
Paunotanga kutsvoda munhu Leo, kuti hawo muchikwanisa. chiratidzo ichi anoda upenyu kufanana kufirimu, uye vachanyadziswa pamwe chete chinhu akawanda uye bhowa. Kiss pasi moonlight, ari kudira mvura, kana pakati pomugwagwa. Ngachive wakazadzwa uye achaichera.
Paunotanga kutsvoda munhu Virgo, kuongorora mweya wako kare. Kana akaenda chisvusvuro, yakarova yokugezera asati asiya kuti chokwadi hapana ari rakabayirwa mazino ako uye unogona mifananidzo inokukurudzira munhu chemindi kana kushandisa mouthwash. Hapana uvatendeutse kure kupfuura vachikisana muromo dzakasviba. Dzidzira chidobi zvakanaka nokuti zvechokwadi vanoziva penhumbi dzavo.
PEJI: 1 2